ch 18 ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 18 ယောဟန်သည်
18:2 But Judas, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုသစ္စာဖောက်, also knew the place, for Jesus had frequently met with his disciples there.
18:3 ထိုအခါယုဒ, when he had receivedacohort from both the high priests and the attendants of the Pharisees, approached the place with lanterns and torches and weapons.
18:5 သူတို့ကသူ့ကိုပြန်ပြော, “Jesus the Nazarene.” Jesus said to them, “I am he.” Now Judas, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုသစ္စာဖောက်, was also standing with them.
18:6 ထိုအခါ, when he said to them, “I am he,” they moved back and fell to the ground.
18:7 Then again he questioned them: “Who are you seeking?"ထိုသူတို့ကဆိုပါတယ်, “Jesus the Nazarene.”
18:8 ယရှေုသညျတုန့်ပြန်: “I told you that I am he. ထို့ကြောင့်, if you are seeking me, permit these others to go away.”
18:11 ထို့ကြောင့်, ယေရှုသည်ပေတရုအားမိန့်: “Set your sword into the scabbard. Should I not drink the chalice which my Father has given to me?"
18:16 But Peter was standing outside at the entrance. ထို့ကြောင့်, the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to the woman who was the doorkeeper, and he led in Peter.
18:17 ထို့ကြောင့်, the woman servant keeping the door said to Peter, “Are you not also among the disciples of this man?"သူကပြောပါတယ်, “I am not.”
18:21 Why do you question me? Question those who heard what I said to them. အကယ်, they know these things that I have said.”
18:22 ထိုအခါ, when he had said this, one the attendants standing nearby struck Jesus, ဟုဆို: “Is this the way you answer the high priest?"
18:24 And Annas sent him bound to Caiaphas, ယဇ်ပုရောဟိတ်.
18:26 One of the servants of the high priest (a relative of him whose ear Peter had cut off) သူ့ကိုကပြောပါတယ်, “Did I not see you in the garden with him?"
18:27 ထို့ကြောင့်, နောက်တဖန်အ, Peter denied it. ထိုခဏခြင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏.
18:29 ထို့ကြောင့်, Pilate went outside to them, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “What accusation are you bringing against this man?"
18:31 ထို့ကြောင့်, ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, “Take him yourselves and judge him according to your own law.” Then the Jews said to him, “It is not lawful for us to execute anyone.”
18:33 ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်နောက်တဖန်အိမျတျောဦးသို့ ဝင်., သူကသညျယရှေုကိုခေါ်ဟုလြှောကျလေ၏, "သင်တို့သည်ယုဒရှင်ဘုရင်တွေဟာ?"
18:34 ယရှေုသညျတုန့်ပြန်, "သင့်ကိုယ်သင်ဒီအဆိုလျက်နပေါ, သို့မဟုတ်ငါ့အကြောင်းကိုသင်၌ပြောပြီအခြားသူများရှိသည်?"
18:35 ပိလတ်မင်းသည်တုန့်ပြန်: "ငါသည်ယုဒလူ Am? သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူမျိုးနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ငါ့ကိုရန်သင့်အားလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြ. မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ?"
18:36 ယရှေုသညျတုန့်ပြန်: "ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မ. ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကကမ္ဘာ၏ဖြစ်လျှင်, ငါယုဒလူတို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါ့ဝန်ကြီးများမုချကြိုးစားကြသည်မယ်လို့. သို့သော်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤအရပ်မှယခုမဟုတ်ပါဘူး။ "
18:37 ဒါကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်ဟုလြှောကျ, "သင်တစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်တွေဟာ, ထို့နောက်?"ယေရှုက, "ခင်ဗျားတို့ငါရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏ဟုနေကြတယ်. ဒီအတှကျငါမွေးဖွားခဲ့တယ်, နှင့်ဤအဘို့ငါဤလောကသို့ကြွလာ: ငါအမှနျတရားကိုသက်သေခံချက်ကိုပူဇော်စေခြင်းငှါဤမျှ. သမ္မာတရားကိုသူသည်လူတိုင်းကိုငါ၏အသံကိုကြား။ "
18:38 ပိလတ်မင်းသည်ကလညျး, “What is truth?” And when he had said this, he went out again to the Jews, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, “I find no case against him.
18:39 But you haveacustom, that I should release someone to you at the Passover. ထို့ကြောင့်, do you want me to release to you the king of the Jews?"
18:40 Then they all cried out repeatedly, ဟုဆို: “Not this one, but Barabbas.” Now Barabbas wasarobber.